Ịnwụ anwụ n'okpuru 1300mm Manufacturers & Suppliers - China Die-cuting n'okpuru 1300mm Factory
GUOWANG C106 AUTOMATIC DIE-CUTTER ENWEGHỊ achụpụ
A na-ejikwa moto na-achịkwa mmezi ikpo okwu n'ụzọ ntụgharị maka nri akwụkwọ ziri ezi.
Usoro ibu ụzọ, nri na-adịghị akwụsị akwụsị, nnukwu ikpo (Max. elu elu dị elu ruo 1600mm).
Enwere ike ịmepụta ikpo zuru oke na pallets nke na-agba ọsọ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè maka usoro ibu ụzọ.Nke a na-enye aka dị ukwuu n'ịmepụta nke ọma ma mee ka onye ọrụ bugharịa ikpo a kwadebere ka ọ bụrụ nri nke ọma na nke dabara adaba.
GUOWANG C80 AUTOMATIC DIE-CUTTER ENWEGHỊ achụpụ
Onye na-eri nri dị elu nke nwere 4 suckers maka iweli akwụkwọ na 4 suckers maka mbugharị akwụkwọ na-eme ka akwụkwọ nri kwụsiri ike na ngwa ngwa.Ogologo na akụkụ nke suckers na-adị mfe mgbanwe iji dobe mpempe akwụkwọ kwụ ọtọ.
MWB 1450Q narị afọ (ya na nkewa) Semi-Auto Flatbed Die Cutter
Century 1450 nlereanya nwere ike ijikwa corrugated osisi, plastic osisi na kaadiboodu maka ngosi, POS, nkwakọ igbe wdg.
GW okpukpu abụọ ọdụ anwụ anwụ na igwe stamping foil
Guowang Automatic Ugboro abụọ ọdụ anwụ anwụ na-ekpo ọkụ foil-stamping Machine nwere ike na-aghọta a iche iche nke dị iche iche Nchikota site ahịa chọrọ.
Nke mbụ unit nwere ike iru 550T mgbali.nke mere na ị nwere ike nweta nnukwu mpaghara stamping+miri embossing+ na-ekpo ọkụ foil-stamping+strapping n'otu ọsọ.
GUOWANG T-106Q AUTOMATIC FLATBED DIE-CUTTER nwere ihe ndọpụ
T106Q bụa ukwuu akpaaka na ergonomic die-cutter na ahịa.Nke a n'elu igwe nso na-ebupụta enweghị atụ arụpụta ọrụ ekeleọtụtụ atụmatụ makangwa ngwa, mmepụta anaghị akwụsị akwụsị, obere oge nhazi oge, ma na-enyeọnụ ahịa arụmọrụ dị elu iji mee ka ị bụrụ asọmpi na ụlọ ọrụ.